What to ask an Employer during an interview ﻿
What to ask an Employer during an interview
Tags: work jobs employer interview jobless
ကျွန်တော့တို့တတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်မဟုတ်သေးသရွေ့ ဒါမှမဟုတ် ၂၁ ရာစုရဲ့ ခေတ်သစ် Zuckerberg ၊ ခေတ်သစ် Elon Musk မဖြစ်သေးသရွေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အလုပ်အင်တာဗျူးတွေကို ရှောင်လွှဲလို့ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်သစ်တစ်ခုပြောင်းဖို့ကြိုးစားချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်တို့ မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမှာကတော့ အင်တာဗျူးပါပဲ။ မြောက်များစွာသော အလုပ်လျှောက်သူများထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့ stand out from crowd ဖြစ်အောင် အင်တာဗျူးအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ဖို့ဆိုတာ အရေးပါလာပါတယ်။ အင်တာဗျူးရဲ့များစွာသော မေးခွန်းများစွာထဲက မေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ "Do you have any questions for us" ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒီမေးခွန်းကို အကောင်းဆုံးဖြေဆိုရင်းနဲ့ အလုပ်ခန့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ့်သူအနေနဲ့ သင့်အပေါ်ပိုမိုသဘောကျအောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်လား။
(၁) ဒီကုမ္ပဏီအကြောင်း ပိုပြီးသိချင်ပါတယ်
သင်အလုပ်လာလျှောက်တဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကို အနည်းဆုံးတော့ အကြမ်းဖျဉ်းသိအောင်လုပ်လာဖို့ဆိုတာ သင့်ရဲ့ တာဝန်တစ်ခုပါ။ သို့သော်ဒီမေးခွန်းမေးခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီအကြောင်း သင်လေ့လာထားသမျှကို ပြန်လည်ပြောပြရင်းနဲ့ အသုံးချနိုင်သလို၊ သင့်အနေနဲ့လည်း အခုအလုပ်လာလျှောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိကြောင်းကိုလည်း ဒီမေးခွန်းနဲ့အတူ ပြသပြီးဖြစ်သွားမှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ပုံအကြောင်း၊ working environment အကြောင်း၊ atmosphere အကြောင်း အစရှိတာတွေကို မေးမြန်းရင်းနဲ့ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။
(၂) အခုအလုပ်ခေါ်တဲ့နေရာဟာ ရာထူးအသစ်လား အဟောင်းပါလား?
သင်အခုအလုပ်လာလျှောက်တဲ့ သင့်ရဲ့ရာထူးနေရာအကြောင်းကို မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ထိုရာထူးအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားမှုကို သရုပ်ဖော်နိုင်သလို၊ သင်ပြုလုပ်ရမယ့်တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်းထိ ဆက်လက်မေးမြန်းကာ ကောင်းမွန်သော ဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ တကယ်လို့ ဒီရာထူးက အသစ်ဆိုရင် ထိုရာထူးအသစ်ကိုဖန်တီးရတဲ့အကြောင်းကို မေးမြန်းနိုင်သလို၊ ရာထူးနေရာ အဟောင်းဆိုရင်လည်း သင်ဘာလို့ထိုနေရာကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ မေးမြန်းရင်းနဲ့ သင်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပါ ဆက်လက်မေးမြန်းနိုင်မှာပါ။
(၃) အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ရမယ့် အဖွဲ့အကြောင်းပြောပြပါ ?
ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အသင်းအဖွဲ့နဲ့အတူ လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူးမှာ သင့်နဲ့ အတူလုပ်ကိုင်ရမယ့် အသင်းအဖွဲ့အကြောင်းကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် သင့်အနေနဲ့ သင်လုပ်ကိုင်ရမယ့် ပါတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို၊ သင်နဲ့အတူတူလုပ်ကိုင်ရမယ့်သူတွေရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေအကြောင်း၊ သင့်တာဝန်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ သူတွေရဲ့အကြောင်းကို ပိုမိုအကျွမ်းတဝင်ရှိလာမှာပါ။
အသင့်အဖွဲ့တစ်ခုမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မှာဖြစ်တာနဲ့အညီ သင့်ရဲ့ CV မှာလည်း သင်ဟာယခင်က အသင်းအဖွဲ့နဲ့ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးကြောင်း ပြသနိုင်မယ်ဆို ဒါဟာသင့်အတွက် အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။
(၄) နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို သိလိုပါတယ်
သင့်အနေနဲ့ သင့်တာဝန်ယူရမယ့် ရာထူးနေရာနဲ့အညီ သင်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ သင်ဟာဒီရာထူးနေရာအတွက် သင်အမှန်တကယ်တာဝန် ယူနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာသိစေနိုင်မှာဖြစ်သလို သင့်ကိုအလုပ်ခန့်မယ်သူဟာ သင့်ကိုဘာတွေပြုလုပ်စေချင်လည်း၊ သင့်ဆီက ဘာတွေမျှော်လင့်ထားလည်းဆိုတာ သိနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ကုမ္ပဏီအတူလျှောက်လှမ်းရမယ့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုသိလိုပါတယ်
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သင်မဖြစ်ချင်ဆုံးအရာကတော့ သင်လက်ရှိလုပ်နေရတဲ့ နေရာဟာ အနာဂတ်အတွက် တိုးတက်မှုမရှိနိုင်တော့တဲ့ နေရာဖြစ်နေမှာကိုပါပဲ။ အလုပ်ထဲက သင့်မိတ်ဆွေတွေ ရာထူးတွေတိုးသွားသလောက် သင်ကတော့ လက်ရှိနေရာမှာပဲနှစ်ပေါင်းများစွာ မနေချင်တာကတော့ အသေအချာပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ထိုရာထူးနေရာကိုလက်မခံခင်မှာ ထိုရာထူးအပေါ် သင့်ကုမ္ပဏီရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေကို ကြိုတင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ထိုသို့မေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် သင့်အနေနဲ့ အနာဂတ်စီမံချက်တွေချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်သလို၊ ထိုကုမ္ပဏီနဲ့အတူ လျှောက်လှမ်းရမယ့် သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်း မြင်လာစေနိုင်မှာဖြစ်သလို သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်း အင်တာဗျူးသူတွေ သတိပြုစေမိမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၆) ကုမ္ပဏီရဲ့ Internal training အကြောင်းကို ပြောပြပေးပါ
Life-long learner ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ အမြဲသင်ယူလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေရမှာဖြစ်သလို၊ သင်အလုပ်ဝင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းဟာလည်း သင့်အတွက် သင်ယူလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေ ထောက်ပံပေးဖို့ရှိလည်းဆိုတာကိုလည်း သင့်အနေနဲ့ ကြိုတင်သိရှိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ L&D ဆိုတဲ့ Learning and Development ပိုင်းကို အာရုံစိုက်လာကြသလို၊ internal training program တွေနဲ့ ကိုယ့်ဆီကဝန်ထမ်းကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့လည်း သင့်ရဲ့ တိုးတက်မှုကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို သိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
(၇) ကုမ္ပဏီရဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်ကို သိလိုပါတယ်
သင့်အနေနဲ့ သင်နဲ့အတူလျှောက်လှမ်းရမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ သင့်အပေါ်ထားမယ့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကို မေးမြန်းပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အနာဂတ်အစီအစဉ် ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်း မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ အဲ့လိုမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့် သင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မယ့် အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ ကုမ္ပဏီအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြောင်းကိုလည်း ထိုမေးခွန်းနဲ့အတူ ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးအဆုံးသတ်မှာ သင့်ကို ပြန်ဆက်သွယ်မယ့်အချိန်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်ရလဒ်ကို သိရှိနိုင်မယ့်အချိန်ကို မေးခွန်းမေးတာဟာလည်း ကောင်းသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ အင်တာဗျူးရလဒ်ကို အချိန်တိုင်း ရင်တမမနဲ့ ဖုန်း ringtone မြည်သံကို မျှော်လင့်လိုက်၊ email ကို အချိန်တိုင်းစစ်လိုက်နဲ့ အမြဲတမ်းလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့်တော့ သင့်အနေနဲ့ ရလဒ်သိရှိမယ့် အချိန်အတိအကျကို သိဖို့ခဲယဉ်းပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ ခန့်မှန်းအချိန်ကို သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူးပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ သင့်အရည်အချင်းကို သိအောင်ပြောပြရတာဟာ တကယ်တော့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့တော့ လုံလောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုရှိမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ အရည်အချင်းကိုအကောင်းဆုံး သရုပ်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်သလို၊ အဆုံးသတ်မှာ ကောင်းမွန်သော မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းဖြင့် သင့်အပေါ်အလုပ်ခန့်မယ့်သူရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါမေးခွန်းတိုင်းကို အင်တာဗျူးတိုင်းမှာမေးမြန်းရမယ်ဆိုပြီး မှတ်သားထားစရာတော့မလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ကြုံတွေ့ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ စဉ်းစားမှုကို ချင့်ချိန်ကာ အကောင်းဆုံးမေးခွန်းတွေကို ပြန်လှန်မေးမြန်းခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်မှာပါ။